နေအိမ် » လှုပ်ရှားမှု » Ninjago: SPINJITZU SNAKEDOWN
ဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ: Ninjago: SPINJITZU SNAKEDOWN
ဖေါ်ပြချက်: ထိုမြွေ၏မြင့်တက် Fight ။ ဂိမ်း Spinjitzu Snakedown အတွက်! အဆိုပါ Hypnobrai တစ်ဦးရွာတိုက်ခိုက်ကြသည်။ Spinjitzu ၏မာစတာနှင့်အချို့သောအလေးအနက်မြွေအမြီးကန်: Ninjago မှကိုးလ်, ဂျေး, Kai သို့မဟုတ် Zane Choose! Ninja-GO!
ကစား: 1,791,953 tag ကို: ကာတွန်းဂိမ်း, လက်ရေးရုပ်ပုံကြီး, နင်ဂျာ, နင်ဂျာဂိမ်း, ဆာမူရိုင်း, ဆာမူရိုင်းဂိမ်း, ninjago, ninjago ဂိမ်း